15 Podcastters -ka ugu Mushaharka Badan | Faallooyinka 2021 | Ganacsiyada
Bogga ugu weyn 15 Podcastters -ka ugu Mushaharka Badan | 2021 Faallooyinka
15 Podcastters -ka ugu Mushaharka Badan | 2021 Faallooyinka
isha sawirka: wwwunsplash.com
Podcast -ka waa faylal maqal ah oo dhijitaal ah oo taxane ah oo isku jira oo ay isku xigaan dhacdooyin u muuqda kuwo aan isku xirnayn oo adeegsaduhu ku soo dejisan karo aalad gaar loo leeyahay si loo dhegeysto toos ah.
Iyada oo la adeegsanayo codsiyada qulqulka iyo adeegyada podcasting -ka, adeegsadayaasha waxaa la siiyaa hab ku habboon oo isku dhafan si ay u maareeyaan safka isticmaalka shaqsiyeed ee laga helo ilo badan oo podcast ah iyo aaladaha ciyaarta.
Taxanaha podcast -ka ayaa sida caadiga ah muujiya ugu yaraan hal marti -geliye soo noqnoqda oo ku hawlan dood ku saabsan mowduuc gaar ah ama dhacdo hadda jirta.
Mowduucyo dhowr ah oo laga dooday iyo waxyaabaha ku jira bandhigyada muuqaalka ayaa laga yaabaa inay u dhexeeyaan si taxaddar leh loo qoray si dhammaystiran loo hagaajiyay.
Podcast -ku wuxuu noqon karaa ururinta wax -soo -saar cod dheer oo farshaxan leh oo leh walaacyo la xiriira mowduuc ku saabsan cilmi -baarista sayniska, saxafinimada dabiiciga ah oo ay u muuqato isku xigxiga u eg dhacdooyinka nolosha qof.
Taxaneyaal badan oo podcast ah, waxaa dhinac laga bixiyaa, degel leh xiriiriyeyaal iyo muujinta qoraallada, taariikh nololeedka martida, ilo dheeri ah, qoraallo, faallo, iyo xitaa gole bulsheed oo u heellan ka doodista nuxurka bandhigga.
Dhanka kale, maqaalkani wuxuu ku dhibi doonaa podcasters -ka ugu mushaarka badan.
Bilaabidda Podcast ma u qalantaa?
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ay shaqsiyaadku inta badan rabaan inay ka jawaabaan ka hor inta aysan ku biirin podcast -ka waana hubaal waxyaabaha aadka loogu baahan yahay in la sameeyo.
Bilaabidda podcast -ga waa u qalantaa maadaama ay u oggolaanayso mid ka mid ah inuu suuqgeeyo nuxurka dhagaystayaasha ganacsiga isla markaana uu ku awood badan yahay. Sida iska cad tani waa mid ka mid ah siyaabaha lacag loogu sameeyo podcast -ka.
Waxaa jiray koboc aad u weyn oo laga diiwaan geliyey warshadaha dhegeysiga.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Shirkii Horumarinta Adduunka ee Apple, 550,000 podcasts firfircoon ayaa la martigaliyay waxayna ka koobnaayeen 18.5 milyan oo dhacdooyin.
Sannadkii 2019, waxaa jiray koror dhan 36% tirada cajaladaha la baahiyay hal sano iyadoo tirada ay ka korodhay 550,000 podcasts firfircoon ilaa in ka badan 750,000 podcasts firfircoon, iyo 30 milyan oo dhacdooyin.
Waa maxay sababta loo bilaabayo Podcast?
Waxaa jira dhowr sababood oo dadka loogu dhiirrigeliyo inay abuuraan podcast.
Soo -saaraha podcast -ka, oo badiyaa labanlaab u ah martigaliyaha podcast -ka sidoo kale, wuxuu jeclaan karaa inuu sameeyo waxyaabaha soo socda isagoo adeegsanaya podcast -kiisa:
Muujiyo dareen shakhsiyeed,
kordhiso muuqaalka xirfadeed,
ku xirmaan shabakad bulsheed oo saamayn leh ama fikrado saamayn leh,
kobciso koox dad ah oo isku aragti ah, ama
soo bandhigo xirfadda waxbaridda ama arrimaha khuseeya fikirka (laga yaabee inay ku hoos jiraan taageero samafal).
Macluumaadka Podcast -ku inta badan waa bilaash ama, ugu yaraan, waa la awoodi karaa macaamilka caadiga ah ee podcast -ka. Markay sidaas tahay, podcasting -ka ayaa inta badan lagu tilmaamaa dhexdhexaad carqaladeeya, taas oo ka soo horjeeda dayactirka qaababka dakhli dhaqameedka.
Boodhadh muddo dheer soconaya oo leh tilmaam gadaal oo muhiim ah ayaa loo maareyn karaa cunista xad-dhaafka ah.
Akhri: 15 Software -ka Podcasting -ka ugu Fiican ee ugu Fiican, Madal, iyo Codsiyada Sanadka 2021 -ka
Sidee bay podcasters -ku lacag u helaan?
Podcastters -ku waxay lacag ka helaan waxyaabaha soo socda:
Damaanadqaadayaasha iyo Xayeysiinta
Tababbarka iyo La -talinta
Crowdfunding iyo Deeqaha
Intee in le'eg ayaad ka samayn kartaa Podcasting?
Podcastters -ka waxaa lagu yaqaanaa inay kasbadaan wax badan oo ka mid ah baloogyadooda marka laga reebo soo -celinta maaliyadeed ee ay podcast -ku kasbadaan.
Sababo badan oo podcast -ku uu kasbado, ayaa inta badan dhagaystayaashu soo jiitaan iyo xaddi badan oo dakhliga xayeysiiska ah oo ay soo celiyaan.
AdvertiseCast waxay leedahay celcelis ahaan 30-ilbidhiqsi CPM (qiimaha 1K ee dhageystayaasha) qiimahoodu waa $ 18, halka 60-ilbidhiqsi CPM ay yihiin $ 25.
Sannadkii 2018, Ringer wuxuu haystay ku dhawaad ​​420 milyan oo la soo degsado taas oo ku kasbatay $ 15 milyan oo dakhli xayeysiis ah (lacag -bixin).
Amy Schumer waxay heshay lacag dhan $ 1 milyan oo kaliya abuuro show loogu talagalay Spotify.
Gadaal dambe, waxaan ka wada hadli doonnaa Podcastters -ka ugu Lacagta Badan.
Intee in le'eg ayay podcasters -ka ugu sarreeya sameeyaan?
Boodhadh -yada oo leh ku dhawaad ​​10,000 oo la soo dejisto dhacdo kasta, milkiilayaashu waxay filan karaan inay sameeyaan inta u dhaxaysa $ 500 - $ 900 qayb kasta oo ka mid ah iibinta xiriirka.
Xirfadlaha ugu sarreeya wuxuu kasban karaa lacag sanadle ah oo u dhaxaysa 5-30 milyan oo Doolarka Mareykanka ah.
Sideen ku bilaabi karaa podcast -ga guuleysta sanadka 2021?
Halkaan waxaa ah tuse tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo bilaabo podcast-kaaga oo loo bilaabo bandhiggaaga.
Wixii intaas dhaafsiisan, talaabooyinkani waxay kugu hagi doonaan sida loo qorsheeyo guusha podcast-kaaga, iibsashada/isticmaal qalab tayo sare leh, duubis, tafatirid, daabacaad, iyo koritaan.
Si aad u bilowdo podcast guuleysta, waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Qeex sababta aad u samaynayso podcast
Soo ogow/dulmar cidda podcast -kaagu yahay
Khariidadee sababaha su'aasha ah sababta dhagaystayaashaadu u dhagaysan doonaan
Sii podcast -kaaga magac soo jiidasho leh
Go'aanso intee in le'eg (muddada) dhacdadu qaadanaysaa oo ku dheggan tahay
Go'aanso inta jeer ee aad sii deyn doonto dhacdo
Dooro cinwaano dhacdooyin wanaagsan oo sii diyaari wakhti ka hor.
U dooro qaab podcast -kaaga oo ku dheg.
Iibso/ haysato qalab wax lagu duubo oo fiican
Samee software duubis iyo tafatir ah
U diyaari sida loo muujiyo qoraalka
Ku tababar sida loogu hadlo makarafoonka.
Diiwaangeli martida fog ama kuwa wax wada-qabta
Tafatir podcast -kaaga.
Dooro oo ku dar muusig faylkaaga.
Abuur Coverart podcast
Dooro podcast -kaaga martigelinta
U soo gudbi liisaska
Samee qorshayaal meesha aad ku daabici lahayd tusmooyinkaaga
Uma baahna macaamilka wax badan, kharash-caqli-gal ah, si loo helo podcasts.
Tiro ka mid ah podcast -yada ayaa xor u ah in la soo dejiyo laakiin inta ay arrintu sidaa tahay, waxaa jira xannibaad lagu soo dejinayo bilaashka ah qaar kale oo ay qoreen shirkaduhu ama ay kafaala qaadeen, marka lagu daro xayeysiisyada ganacsiga.
Podcast -ka ayaa sidoo kale noqon kara hawl ganacsi oo lagu taageerayo isku -darka qaar ka mid ah qaabka rukunka lacag -bixinta ah, xayaysiis, ama badeecad la keenay iibka kadib.
Si kastaba ha noqotee, waxaad weli noqon kartaa mid ka mid ah Podcastters -ka Lacagta ugu sarreeya xitaa marka aad soo saarto cod -baahiyaha bilaashka ah.
Akhri: Immisa ayee ku kacaysaa in la bilaabo Podcast -ka 2021 | Tilmaan Buuxo
Waa maxay sababta loo abuuro Podcast?
Macluumaadka Podcast -ku inta badan waa bilaash ama, ugu yaraan, waa la awoodi karaa macmiilka podcast -ka caadiga ah. Markay sidaas tahay, podcasting -ka ayaa badiyaa lagu tilmaamaa dhexdhexaad dhexdhexaad ah, kaas oo ka soo horjeeda dayactirka qaababka dakhli dhaqameedka.
Tan iyo bilawgii dhageysiga, 2021 wuxuu ahaa mid ka mid ah sannadihii ugu guusha badnaa.
Iyada oo ay jiraan shaqsiyaad badan oo ka shaqeeya guriga, iyo kuwo kale oo u hoggaansan amarrada joogtada ah ee guriga-ka-badbaadsan ee la soo saaro, martigaliyayaasha podcast-ku waxay noqdeen saaxiibo dhow dhagaystayaal kala duwan oo sii kordhaya.
Tani waxay dhalisay liiska 20 -ka ugu sarreeya ee podcasters -ka oo sameeya malaayiin doollar sannadkii.
Tixgelinnada Podcastters -ka Lacagta Ugu Badan Bixiya
Warshadaha podcast -ka, waxaa jiray kala -guur dhowaan ah oo marti -geliyeyaasha podcast -ku ay heleen goobo ay ka kooban yihiin waxyaabo gaar ah tanina waxay sidoo kale gacan ka geysatay keenista sannad guul leh.
Tixgelinta tixgelinta liiskan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
suuq -geynta, iyo
iibinta badeecadaha iyo adeegyada la socda.
Kuwani waxay go'aamiyaan dakhliga soo -saareyaasha.
Qaar ka mid ah barnaamijyada caanka ah iyo kuwa gaarka ah ayaa sii xajistay boosaskooda liiska podcasters-ka ugu mushaarka badan sanadka 2021 sababtuna tahay joogtaynta qaababka wax soo saarkooda.
Marka laga soo tago kuwa aan kor ku soo sheegnay waxaa jira dhowr siyaabood oo cusub oo ay ku jiraan marti-geliyeyaasha soo socda, majaajilaystayaasha, iyo suxufiyiinta oo liiskooda soo galay, oo muujinaya sida dabacsan ee dhexdhexaadka casriga ahi yahay.
Podcastters -ka ugu Lacagta Badan
Goobta Wealth (TWC) kuu keenaya podcasters -ka ugu mushaarka badan sanadka 2021 oo ay ka mid yihiin:
Dave Ramsey ($ 10 million)
Will Menaker, Matt Christman, Felix Biederman, Amber A'Lee Frost & Virgil Texas: Chapo Trap House
Pat Flynn: Dakhliga dadban ee caqliga badan, $ 1.2 Milyan
Andrew Schulz & Akaash Singh: Flagrant 2, $ 1.2 Milyan
Nick Mullen iyo Stavros Halkias
Cody Ko iyo Noel Miller
Ben Kissel, Marcus Parks, iyo Henry Zebrowski
Will Menaker, Matt Christman, Felix Biederman, Amber A'Lee Frost, iyo Virgil Texas.
1. Joe Rogan (30 milyan oo doolarka Mareykanka ah)
Magaca buuxa, Joseph James Rogan. Sayidkan podcast -ka ah wuxuu dhashay Ogosto 11, 1967, waana majaajiliiste Mareykan ah, podcaster, iyo faalleeyaha midabka UFC. Joe Rogan sidoo kale wuxuu hore u ahaa jilaa iyo soo -jeediyaha telefishanka.
Bishii Ogosto 1988, Rogan wuxuu xirfadiisa majaajilada ku bilaabay darajada aagga Boston.
Wuxuu heshiis horumarineed oo gaar ah la saxeexday Disney ka dib markii uu u guuray Los Angeles 1994. Wuxuu ka soo muuqday jilaa dhowr bandhigyo telefishan oo ay ka mid yihiin kubad adag iyo WararkaRadio.
Horyaalkii Dagaalkii Ugu Dambeeyay (UFC) wuxuu ku lahaa wareysi iyo falanqeeye midab midab leh 1997 ka dib markii uu sii daayay majaajilimadiisii ​​ugu horreysay ee 2000.
Laga soo bilaabo 2001 ilaa 2006, wuxuu ahaa martigeliyaha Ha cabsanina Xaqiiqda ka hor inta uusan bilaabin podcastkiisa, Khibrada Joe Rogan markay ahayd Disembar 24, 2009. Muuqaalkiisa ayaa u horseeday inuu ku bato guusha iyo muusigga suugaanta
Khibradda Joe Rogan waxaa bilaabay Rogan iyo majaajiliistaha oo ahaa marti -geliye iyo soo -saare, Brian Redban magaciisa. Waxay si wada jir ah u wada wadeen cajaladda ilaa 2013 markii lagu beddelay Jamie Vernon.
Sannadkii 2015, podcast -ka Joe Rogan wuxuu ka mid ahaa Boodhadhka ugu caansan adduunka, iyada oo si joogto ah loo helo malaayiin aragtiyo halkii dhacdo, sidoo kale lagu marti -qaadayo marti -qaad ballaaran.
Laga soo bilaabo Diseembar 2020, cajaladda Khibradda Joe Rogan ayaa si gaar ah looga heli karaa Spotify, iyada oo la soo dhejiyay YouTube -ka.
2. Karen Kilgariff & Georgia Hardstark (15 milyan oo doolarka Mareykanka ah)
Karen Kilgariff iyo Georgia Hardstark ayaa wada-jir u ah podcast-ka majaajilada ah ee majaajillada runta ah ee loo yaqaan dilkeyga aan ugu jeclahay (MFM).
Bandhigga Podcast-kayga ee aan ugu jeclahay wuxuu bilaabmay horraantii 2016 illaa iyo markaas, wuxuu jebiyey diiwaannada soo dejinta wuxuuna kiciyay xamaasad, is-dhexgal “Murderino” saldhig taageerayaal ah oo u soo baxay raxan-rayn loogu talagalay dalxiisyadoodii adduunka ee la iibiyay.
Waxay caan ku yihiin sumadda sumcadda “Jilicsanow oo Ha Dilin” tanina waxay qaylo -dhaan u dirtay “Murderinos” iyo sac lacag caddaan ah oo loogu talagalay shabakadooda, Sida saxda ah.
Iyada oo leh shan cajaladood oo toogasho ah, iibiyaha ugu fiican, iyo ganacsiga dalxiiska oo kobcaya, qof walba wuxuu daneynayaa inuu arko waxa mustaqbalkoodu yahay.
3. Dave Ramsey ($ 10 million)
Dave Ramsey ayaa ka mid ah podcasters-ka ugu mushaarka badan sanadka 2021. Podcastkiisa waxaa loo yaqaanaa Bandhigga Dave Ramsey.
Dave Ramsey waa kaftan raadiye ruug -caddaa ah oo ka socda Nashville iyo ka baxsan.
Bandhigiisii ​​talo-bixinta ee wicitaanku wuxuu ku jiraa qaab gabbasho leh oo dugsi-jir ah waxaana laga sii daayay in ka badan 600 oo idaacadood oo ka kala yimid Kalamazoo ilaa San Antonio.
Dave Ramsey isaga oo adeegsanaya Ramsey Solutions wuxuu siiyaa casharro maaliyadeed shaqsiyeed oo aan micno lahayn iyo aaladaha miisaaniyadda 13 milyan oo dhegeyste toddobaadle ah.
Sida laga soo xigtay Forbes qiyaaso, si ku salaysan sanad walba, The Dave Ramsey Show podcast -ka kaligiis wuxuu kasbadaa $ 10million.
4. Dax Randall (Khabiirka kursi -gacmeedka Shepard | $ 9 million)
Wuxuu dhashay Janaayo 2, 1975, Dax Randall Shepard waa jilaa Mareykan ah, majaajiliiste, qoraa, agaasime, iyo marti -geliye podcast.
Podcast -ka Shepard waxaa loo yaqaanaa Khabiir kursi oo waa podcast -ka wareysanaya dadka caanka ah, suxufiyiinta, iyo aqoonyahanno ku saabsan noloshooda.
Podcast -kan wuxuu shaqaynayay ilaa 2018 wuxuuna duubay dad lagu qiyaasay bil walba 20 milyan
Shepard ayaa si fiican loogu yaqaanay shaqadiisa filimada muuqaalka ah oo ay ka mid yihiin:
Bilaa Paddle (2004),
Shaqaalaha Bisha (2006),
Aan Xabsiga Tagno (2006),
Hit and Run (2012), iyo CHiPs (2017),
Shepard ayaa qoray oo hagayay labadii ugu dambeeyay.
Laga soo bilaabo 2010 illaa 2015, wuxuu ku ciyaaray dabeecadda, Crosby Braverman, ee taxanaha majaajillada ee NBC Parenthood oo ay weheliyaan filimaan kale oo uu jilay.
Podcast-kiisa muuqaal-muuqaalku wuxuu ka kooban yahay sheekaysiga saaxiibbadiisa caanka ah, sida Claire Danes, iyo khubarada sida neurosurgeon Sanjay Gupta wuxuuna soo jiitay xayeysiiyayaal ay ka mid yihiin barnaamijka jirdhiska Mindbody iyo sameeyaha boorka Bob's Redmill.
Bandhigyadiisa tooska ah sida caadiga ah waxay leeyihiin dhagaystayaal celcelis ahaan ku dhow 4,000 tanina waxay caddayn u tahay xaqiiqda ah inay garaacaan!
5. Bill simmons Pod Simmons Podcast | $ 7 million
Wuxuu dhashay 25 -kii Sebtember, 1969, William John Simmons III waa xiddig Falanqeeyaha ciyaaraha Mareykanka, qoraa, podcaster, iyo qoraagii hore ee ciyaaraha.
Isagu waa aasaasaha iyo Sarkaalka Sare ee Ringer, oo ah mareeg isboorti iyo dhaqan pop ah sannadka 2016.
Tilmaamkan uu ku dhibtooday inuu qabsado kaas oo mas'uul ka ah booskiisa ba'an ee darajada shabakadda Amazon ee Alexa maadaama lagu qiimeeyay No. 5,638.
Waxaa xusid mudan in dhinaca maqalka ee ganacsiga podcast -ku uu guulaysanayo in kastoo.
Websaytka Simmons wuxuu helay dareenkiisii ​​ugu horreeyay ee ahaa “The Boston Sports Guy”.
2001, Bill Simmons waxaa loo shaqaaleeyay booska faallooyinka ESPN. ESPN, wuxuu ka shaqeeyay degelka Grantland halkaas oo uu ka shaqaynayay ilaa 2015.
Kahor intaadan ka tagin ESPN,
Simmons wuxuu qoraa u ahaa ESPN.com, oo marti u ahaa podcast -kiisa gaarka ah isla mareegaha isla markaana cinwaan looga dhigay BS -ta Warbixin. Wuxuu kaloo falanqeeyay Tirinta NBA muddo labo sano ah.
Labadii sano ee la soo dhaafay, Pod Simmons Podcast wuxuu ku jiray 25 -ka ugu sarreeya Apple. Hadda waxaa ku soo biiray 35 bandhig oo shabakadda ka socda.
Barnaamijka calanka ee Simmons Podcast wuxuu keenay $ 7 milyan sanadkii la soo dhaafay, laakiin waxaa jira u janjeera in kuwa kale ay dhowaan heli doonaan lacag ka sii weyn xitaa: waxaa la soo sheegay in Spotify ay raadineyso inay hesho shabakadda.
6. Will Menaker, Matt Christman, Felix Biederman, Amber A'Lee Frost & Virgil Texas: Chapo Trapnetwork | $ 2 Milyan
Kani waa mid ka mid ah podcasts ugu kicinta badan liiska podcasters-ka ugu mushaarka badan sanadka 2021.
Chapo Trap House wuxuu helay taageero caan ah markii laga mamnuucay Reddit iyo Twitch sanadka 2020, isagoo tixraacaya hadalada nacaybka iyo ku xadgudubka sharciyada xuquuqda daabacaadda.
Sannadkii 2016-kii, barnaamij-wada-hayaha barnaamijka, Frost, wuxuu curiyay ereyga “bacda bidix ee bidix” maqaalkii ‘The Necessity of Political Vulgarity’ oo hadda loo adeegsado in lagu qeexo dhowr baloog oo ku jira noocooda oo ay ku jiraan Red Scare iyo Cum Town.
Podcast-kan wuxuu shaqeeyaa laba-toddobaadle wuxuuna mar kale cinwaan uga dhigay 2020 markii ay u yeereen musharrixiinta siyaasadeed ee doorashada sida Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, iyo Joe Biden.
Boqortooyada podcast -ku waxay ballaarisay bishii Ogosto ee 2018 markii ay sii daayeen buug sii waday inuu noqdo a New York Times ee Shirkadda Best oo cinwaan looga dhigay Tusaha Chapo ee Kacaanka.
Akhri: 20 Podcasts oo ah Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah 2021
7. Tim Dillon: Bandhigga Tim Dillon, $ 1.3 Milyan
Tim Dillon wuxuu ka mid yahay podcasters -ka ugu mushaarka badan sanadka 2021 waxaana lagu yiqiin iibinta deymaha hoosaadka ka hor Dhibaatada dhaqaale ee 2008 taasoo uu dambaskeeda ka kacay si uu u noqdo majaajiliiste taagan.
Waxa uu lahaa jidkiisii ​​sare warshadaha podcast iyada oo loo marayo wax -soo -saarka joogtada ah ee maaddooyinka qosolka leh ee isku dayaya in ay wax ka qabtaan qaar ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu hamiga iyo murugsan maalinta.
Aagga gaarka ah ee Dillon waa shirqool la taaban karo. Waxa uu sahamin ku sameeyay qaar ka mid ah mawduucyada mugdiga ah ee bani'aadamnimada oo u dhexeeya tahriibinta dadka oo uu dhiirrigeliyay dokumenteriga 2014 -ka Yaa qaatay Johnny qarsoodiga ugu dambeeyay ee ka dambeeyay geerida maal -haye Jeffrey Epstein.
Dillon wuxuu markii hore martigelinayey show -ga solo oo uu hadda garab taaganyahay saaxiibkiis, Ray Kump. Tan waxaa weheliyay hadalo qosol leh oo si aan habboonayn loo agaasimay oo uu soo saaray soo saare Ben Avery.
Siideynta Tim Dillon waxay ku tusaysaa YouTube-ka toddobaadlaha iyo muuqashada joogtada ah ee Khibradda Joe Rogan tanna, wuxuu ku muujiyaa faa'iidooyinka iyo kartida goobaha ku-saleysan macaamiisha sida Patreon.
Podcaster -ka Tim Dillon Show wuxuu sameeyay waddo cusub oo ka dhex jirta warshadaha madadaalada, isagoo ka gudbay ilaalayaashii waagii hore.
8. Patrick Hinds & Gillian Pensavalle | $ 1.2 Milyan
Patrick Hinds & Gillian Pensavalle waxay ka mid yihiin podcasters -ka ugu mushaarka badan sanadka 2021 waxaana lagu yaqaanaa podcast -ka loo yaqaan Dambiga Dhabta Ah Oo La Tiigsaday.
Ku noqoshada kuwa ugu guulaha badan duubabka boodhadhka dambiyada waxay qaadataa shaqsiyaad gaar ah iyo sheekooyin xiiso leh gaar ahaan marka ay jiraan baaxad weyn oo podcasts dambiyeed la heli karo.
Patrick Hinds waa podcaster -ka dhaxalka leh wuxuuna caan ku yahay bandhigyadiisa Dadka Masraxa iyo Taariikhda Broadway. Wuxuu ku biirey xoogagga masraxa weheliyaha iyo jilaa Gillian Pensavalle, oo ah martida Hamilcar -ka.
Iskusoo wada duuboo, kooxda martigaliyayaasha firfircoon waxay abuureen muuqaal fayras ah oo laga heli karo dhowr meelood iyada oo diiradda la saarayo dambiyada dhabta ah, shirqoolada casriga ah, iyo qarsoodiga caanka ah.
Iyada oo leh dhacdooyin caan ah oo gaar ah oo loogu talagalay Ted Bundy iyo Jonestown, kooxdu waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Cajaladaha dambiyada runta ah ee guuleysta ilaa maanta, oo sanadkii uu kasbado $ 1.2 milyan.
9. Pat Flynn: Dakhliga dadban ee caqliga badan, $ 1.2 Milyan
Pat Flynn ayaa marti u ah Dakhliga Hore ee Dakhliga ah podcast ay ka muuqdaan wareysiyo toddobaadle ah oo diiradda lagu saarayo xeeladaha qeexaya iyo la -talinta dadka dhisaya meheraddooda internetka
Podcast -ka ayaa laga heli karaa goobo kala duwan oo ay ku jiraan YouTube iyo Apple Podcasts.
Markii hore, Flynn wuxuu ku bilaabay qandaraas shirkad sida Kabtan Shaqo oo ah naqshadeeye.
Dhibaatada maaliyadeed ee ku habsatay 2008 waxay ku ahayd dhabar jab markii laga ceyriyay shirkadda waxaana lagu qasbay inuu abuuro meheraddiisa internetka.
Waa waayo-aragnimadiisii ​​ugu horreysay ee uu la wadaago daawadayaashiisa toddobaadlaha ah waxaana ka mid ah waraysiyo lala yeesho dhowr milkiileyaal ganacsi iyo kuwa bilowga ah oo la wadaaga maalkooda aqooneed ee ku saabsan adduunka ganacsiga.
10. Andrew Schulz & Akaash Singh: Flagrant 2, $ 1.2 Milyan
Andrew Schulz iyo Akaash Singhare oo ka mid ah podcasters -ka ugu mushaarka badan sanadka 2021 waxayna yihiin kuwa martida u ah Calanley 2, podcast-gaar ah oo Patreon ah oo ka dhigaya mid la heli karo saddexda heer ee waxyaabaha la heli karo ee macaamiisheeda.
Kibirka podcast -ka laftiisa ayaa ku jira wada -hadallo “aan la aqoon” iyo “aan la shaandhayn”.
Marka la eego macnaha dhaqanka baajinta, Flagrant 2 wuxuu diyaariyaa waqti gaaban oo ah gargaar loogu talagalay taageerayaasha iyo kuwa raacsan ee raadinaya inay ka fogaadaan podcast -yada faraha badan.
Isaga oo yaqaana taxanaha Netflix-kii ugu dambeeyay ee Schulz Saves America, Andrew Schulz wuxuu la kaashaday majaajiliiste kale Akaash Singh, halkaas oo ay kula wadaagaan fikradaha mowduucyada badhanka kulul ee kala duwan martida sida Alex Jones oo caan ku ah murannada.
Andrew Schulz iyo Akaash Singh waxay caan ku yihiin dabeecadda la siiyay inay la halgamaan dadka kale masayr ama khilaaf. Tani waxay siisay nuxurkii dhagaystayaasha niche, iyaga oo ka dhigaya laba ka mid ah podcasters -ka ugu qanisan sanadka 2021 $ 1.2 milyan oo dakhli sanadeed ah.
11. Nick Mullen iyo Stavros Halkias, Majaajileysteyaal
NickMullen iyo Stavros Halkias, Majaajileystayaasha ayaa marti u ah podcast -ka loo yaqaan Magaalada Cum.
Iyada oo leh 10,822 macmiil, NickMullen iyo Stavros Halkias waa majaajileysteyaal fadhigoodu yahay New York waxayna meel u baneeyeen podcast aad u foolxun oo dhallinyarro ah oo dhiirrigeliya qosol iyo kaftan.
Podcast -ka wuxuu la kulmay xoogaa dib -u -celin ah sababtuna waa muranka lagu iibsaday tan, waxaa la sheegay inay $ 250,000 ka heshay dakhli sanadkii 2017.
12. Cody Ko iyo Noel Miller, Saameeyayaasha Warbaahinta Bulshada
Cody Ko iyo Noel Miller ayaa ka mid ah kuwa ugu mushaarka badan podcasters -ka 2021 waxayna martigeliyaan podcast -ka, Gaangi Hilib Yar.
Ugu horreyntii, Cody Ko iyo Noel Miller ayaa magac ku yeeshay barnaamijka hadda dhintay ee Vine, ka hor inta aysan go'aansan inay majaajiladooda u keenaan maqal, taasoo keentay abuuritaanka Gaangi Yar.
Sanadka 2019, Cody Ko iyo Noel Miller waxay kasbadeen dakhli bishii $ 51,199. Waxay lahaayeen horumarkan maxaa yeelay labada nin ayaa qaatay muuqaalkooda muuqaal safar toos ah. Horumarkaas ayaa keenay iyaga, 10,638 macmiil.
13. Ben Kissel, Marcus Parks, iyo Henry Zebrowski
Ben Kissel, Marcus Parks, iyo Henry Zebrowski waa wada-hawlgalayaashii Podcast-kii Ugu Dambeeyay ee Bidixda.
Podcast-kii Ugu Dambeeyay ee Bidixda waa podcast-ku-saleysan cabsi-gelin oo dib-u-eegis ku sameeya sheekooyinka naxdinta leh iyo kuwa aan khiyaaliga ahayn, iyagoo ilaalinaya 11,346 macmiilkooda Patreon oo maaweeliyay oo faraxsan.
Sida la sheegay, bandhiggu wuxuu sameeyay $ 55,898 bishii 2019.
14. Will Menaker, Felix Biederman, Matt Christman, Amber A'Lee Frost, iyo Virgil Texas
Will Menaker, Felix Biederman, Matt Christman, Amber A'Lee Frost, iyo Virgil Texas ayaa iska kaashanaya Podcast-ka The Chapo Trap House waxayna ka mid yihiin podcasters -ka ugu mushaarka badan sanadka 2021.
Guriga dabin ee Chapo waa cod -baahiye siyaasadeed oo ku xidhnaanaya waxyaabaha qosolka leh dhagaystayaashiisa oo ka badan 30,681 macaamil.
Laga bilaabo sannadka 2019, bandhigga ay dhallinyaradan podcasters -ka martigeliyay ay keeneen soo -celinta $ 137,094 bishii.
Adam Carolla waa Majaajiliiste, martigeliyeyaasha Bandhigga Adam Carolla, waxaana ka mid ah podcasters -ka ugu mushaarka badan sanadka 2021.
Podcast -ka Bandhigga Adam Carolla waxaa la bilaabay 2009 weligiisna tan iyo markaas, wuxuu duubay in ka badan 1.6 bilyan oo la soo degsado. Diiwaankaan wuxuu meeleeyay podcast -ka mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka Podcast -ka.
Laga soo bilaabo 2014, bandhigga garaaca ee muuqaalka cajaladda Adam Carolla ayaa lagu qiyaasay dakhli dhan $ 5 milyan halka uu lahaa hanti dhan $ 16 milyan
Akhri: Sida lacag looga helo Podcast -ka 2021 | Tilmaan Talaabo Talaabo ah
Podcasting -ku wuxuu u yimid inuu sii joogo wuxuuna u ballan qaadayaa soo laabasho aad u weyn podcasters -ka oo ka dhex muuqan doona kuwa kale.
Qaar ka mid ah waddooyinka aad ku kasban karto podcaster -ka waxaa ka mid ah:
Miyaad leedahay xirfadaha isgaarsiinta iyo xirfadaha kale ee lagama maarmaanka u ah inaad noqotid podcaster guuleysta, waxaad maanta bilaabi kartaa inaad podcast -ka kor u qaaddo.
Ugu dambayn, kuwani waxay magacaaga ku dari doonaan hoolka caanka ah Podcastters -ka ugu sarreeya ee Lacag -bixinta.
Sida lacag looga helo Podcast -ka 2021 | Tilmaan Talaabo Talaabo ah
20 Goobaha Tigidhada Riwaayadaha Ugu Fiican Sanadka 2021
Ma jiraan wax la mid ah lacagta bilaashka ah? Hadda, taasi waxay noqon doontaa su'aashii ugu horreysay ee maskaxdaada ku soo dhacda oo…
Sida Loo Bilaabo Meherad Ubax Sannadka 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Aad bay u fiican tahay inaad maqasho inaad xiisaynayso inaad bilowdo ganacsi ubaxeed, taas oo sida cad macnaheedu yahay inaad…
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Lacag La'aan 2022
Haddii sanadka 2020 uu wax na baray, taasi waa in aan shaqo ka helno shirkad sumcad leh oo aan ka shaqeyno…
Lacagta iyo caannimada hadda waxay la mid noqdeen isboortiga sidaa darteed waxay u gogol xaareysaa qaab cusub oo milyaneerayaal badan ah…